कर्णाली प्रदेशबाट शाहीको फुटबल यात्रा – Khel Dainik
कर्णाली प्रदेशबाट शाहीको फुटबल यात्रा
इटहरी । चार जात छत्तीस वर्ण साझा फुलबारी भनिन्छ नेपाललाई तर यो एउटा भनाइमा मात्र सिमित छ । नेपालमा यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जहाँ अझै सम्म पनि विकसित भएको छैन ।
कुरा हो वि.सं. २०४२ साल चैत्र २४ गते जुन बेला युद्ध शाहीको जन्म सबै क्षेत्रबाट पिछडिएको कर्णाली अञ्चलको जुम्ला जिल्ला तत्कालीन कार्तिक स्वामी गा.वि.स. वडा नं. ६ बारकोट र हाल चन्द्रननाथ नगरपालिका वडा नं. १० मा कान्छा छोराका रुपमा बाबु पृथ्वी बहादुर शाही र आमा मुक्ती शाहीको कोखबाट चौथो सन्तानको रुपमा जन्म भएको थियो । उनी बाल्यकालमा निकै चनचले स्वभावका थिए । उनका दुई दिदी र एक दाइ छन ।
त्यतिखेर पिछडिएको कर्णाली अञ्चलको जुम्ला जिल्लामा युद्धले जसोतसो गरि औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका थिए । जुम्ला जिल्लाको जनज्योति मा.वि मा उनले दस सम्म पढे पनि एस.एल.सि दिने बेलामा उनी आर्मीमा भर्ती भए पनि कालिकोट जिल्लाको महादेव मा.वि फोइकोटबाट एस.एल.सि २०६१ सालमा द्धितिय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेका थिए ।
सानै उमेर देखि उनी आफ्ना दाई द्वन्द्व बहादुर शाहीसंग फुटबल खेल्ने गर्थे । स्थानीय स्तरका क्लब लोकाली युवा क्लबबाट दाई भाईसंगै खेल्दा उपाधी पनि हासिल गरेका छन । दाईकै उत्प्रेरणाले नेपाल आर्मीमा भर्ना भए । उनका दाई द्वन्द्व बहादुर शाही उनको लागि प्रेरणाका श्रोत बनेका हुन ।
हुनु न हार दैबलाई टार भने झैँ शाही सानोमा फुटबल खेले पनि कराते खेल्न मन पराउथे । वि.सं. २०६० सुर्खेतबाट शाहीले नेपाल आर्मीमा जागिर खाए । झापाको चारालीबाट करातेमा उनले वान डन प्राप्त गरे । कराते खेल्दा उनले धेरै उपाधी समेत हात प्राप्त गरेका छन ।
उनी करातेबाट नेपाल आर्मीको क्लबमा वि.सं. २०६३ सालमा आबद्ध भए तर मनले चाहेर मात्र हुदैन भाग्यमा पनि लेखेको हुनुपर्छ भने झैँ आर्मीका कर्वशब बिनोद बिष्टले शाहीलाई ट्रायलका लागि फुटबलमा बोलाएका थिए । उनको जादुमय खेलले गर्दा उनी आर्मीको फुटबल टिममा पनि आफ्नो हिस्सा बनाउन सफल भए ।
त्यस पछि उनले कराते खेल्न छाडेका थिए । विश्व मै सबै भन्दा बढी मन पराउने खेल फुटबल नै थियो । जसका लागि उनले करातेलाई छाडेर फुटबल खेल्न थाले । उनले नेपाल आर्मीको लागि पहिलो खेल २०६५ को आहा रारा गोल्डकप खेल्दै आफ्नो फुटबल खेलको जीवन सुरु गरेका थिए ।
उनले नेपालका सबै प्रतियोगिता खेली सकेका छन । आर्मीका उनी भर पर्दा डिफेन्डर हुन । आर्मीले मोफसलका प्रतियोगिता जित्दा शाहीको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । प्रथम माईभ्याली गोल्डकपको फाइनलमा थ्री स्टार विरुद्ध आर्मीको खेलमा शाहीको गोलले नै आर्मीले उपाधी जितेको थियो ।
शाहीले आफ्नो पढाई एस.एल.सि सम्म मात्र पुराएका छन । आर्मीमा जागिर खाए पछि उनले पढ्न समय नमिलेपछि पढाईलाई थाती राख्दै आर्मीमा आफ्नो खेल जीवन अगाडि बढाउने क्रममा वि.सं. २०६५ सालमा सरिता शाहीसंग वैवाहिक जीवनमा बाधिएका थिए । उनको एक मात्र सन्तान छन् । शाहीका छोरा अनिश जंग शाही अहिले सात वर्षका छन ।
यसरी निरन्तर २०६५ साल देखि आर्मीबाट फुटबल खेल्दै आएका शाही एक कर्णाली प्रदेशको समेत प्रतिनिधित्व गरेका छन । अझै पनि कर्णाली प्रदेश सबै क्षेत्रबाट पिछडिएको छ । अरु प्रदेशमा हेरि यस कर्णाली प्रदेश विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा विकास भएको छैन । शाहीको जन्म भएको समयमा कर्णाली विकासमा अग्रसर नै थिएन ।
भौतिक विकास पछि परेको कर्णाली झन खेलकुदमा य शुन्यकै अवस्था रहेको छ । कर्णाली प्रदेश अझै पनि विकासको बाटोमा अग्रसर छ । प्राकृतिक रुपमा धनी रहेको कर्णाली प्रदेश खेलकुदमा पनि उत्तिकै धनी रहेको छ । प्राकृतिक क्षेत्र संगै खेलकुद पनि विकास गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशकै विकास नभएर एक सिंगो नेपालको विकासमा टेवा पुग्छ ।
शाही भन्छन “कर्णाली प्रदेशमा प्रचुर सम्भावना बोकेका खेलाडी रहेको छन तर त्यहाँ खेलाडीहरुका लागि उचित खेलकुदको विकास नभएर सम्भावना भएका खेलाडीहरु पलायन भईरहेका छन् ।“ कर्णाली प्रदेशमा खेलकुदको विकासको लागि प्रदेश सरकारले पनि जोड दिनुपर्ने कुरा बताउछन् शाही ।
कर्णाली प्रदेशबाट नेपाली आर्मीमा आफू फुटबलको लागि आएको र आफू जस्तै धेरै कर्णाली प्रदेशमा फुटबल खेल्ने खेलाडीहरु छन तर उनीहरुले खेल्नका लागि उचित खालको खेल मैदान नरहेको कुरा पनि बताउँछन् शाही । यसका लागि केन्द्रिय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि केही गर्नु पर्नेमा जोड दिन्छन ।
यसका लागि एन्फाले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने उनको बुझाई छ । एन्फाले सरकारी निकायसंग सहकार्य गरेर कर्णाली प्रदेशमा फुटबलको भौतिक संरचना बनाउनु पर्ने, जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशका खेलाडीहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने सक्ने क्षमता हुने शाहीको भनाई छ ।
हुन पनि एन्फाले अहिले फुटबल विकासका लागि रातदिन काम गरिरहेको छ । सबै प्रदेशमा फुटबलका भौतिक संरचनासंगै खेलाडीहरुको लागि पनि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । एन्फाले विशेष गरि कर्णाली प्रदेशमा बढी जोड दियोस । यस प्रदेशमा अलि बढी रुपमा सक्रिय भएर फुटबलको विकासका लागि शुन्य अवस्थाबाट अगाडि अढाओस । सानै उमेर देखि नै फुटबल गतिविधि होस । जसले फुटबलको विकासका लागि सहयोग पुग्ने छ ।
शाहीले यी कुरा बताउदै गर्दा आफू अवकास पछि कर्णाली प्रदेशमा एउटा फुटबल एकेडेमी खोलेर यस एकेडेमीमा कर्णाली प्रदेशका फुटबल खेल्न चाहानेलाई ट्रेनिङ गराइ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन गर्ने योजना रहेको कुरा बताए ।
उनको सोच कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकासको लागि सरकारी निकायको पनि ध्यान जायोस र आगामी दिनमा कर्णाली प्रदेशबाट पनि खेलाडी उत्पादन होस भन्ने रहेको छ ।
← आर्मीको अपराजित यात्रा जारी सी डिभिजनमा उक्लेको झापा फुटबल क्लबका खेलाडीलाई सम्मान →